တရုတ် စက်ရုံမှ ရောင်းချမှု မြင့်မားသော ဘေးကင်းရေး စွမ်းဆောင်ရည် Lithium 48V 12V Goldencell Lifepo4 ဂေါက်တွန်းလှည်း ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ရောင်းချသူများ |Goldencell
စက်ရုံမှရောင်းချခြင်း မြင့်မားသောဘေးကင်းရေးစွမ်းဆောင်ရည် Lithium 48V 12V Goldencell Lifepo4 ဂေါက်တွန်းလှည်း ဘက်ထရီ
1.Long cycle life, မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရ;
2.Small size, light weight, high energy density, environmental friendly;
3. ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအလုပ်လုပ်အပူချိန်အကွာအဝေး၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောမြင့်မားသောနှင့်နိမ့်သောအပူချိန်စွမ်းဆောင်ရည်;
4. မြင့်မားသောထိရောက်မှု၊ တည်ငြိမ်သောပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ မြင့်မားသောပါဝါထွက်ရှိမှု၊ အမြင်အာရုံဒီဇိုင်း။
5. ရိုးရှင်းပြီး လိုက်လျောညီထွေရှိသော စုဝေးမှု။
1.OEM ထုတ်လုပ်ရေး ကြိုဆိုပါတယ်- ကုန်ပစ္စည်း၊ ပက်ကေ့ခ်ျ...
3. သင်၏စုံစမ်းမေးမြန်းမှုအတွက် 24 နာရီအတွင်း သင့်အား အကြောင်းပြန်ပါမည်။
4. ပေးပို့ပြီးနောက်၊ သင်သည် ထုတ်ကုန်များမရရှိမချင်း နှစ်ရက်တစ်ကြိမ် သင့်အတွက် ထုတ်ကုန်များကို ခြေရာခံပါမည်။ကုန်ပစ္စည်းတွေရတဲ့အခါ စမ်းသပ်ပြီး တုံ့ပြန်ချက်ပေးပါ။သင့်တွင် ပြဿနာနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးစရာများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် ဖြေရှင်းနည်းကို ပေးဆောင်ပါမည်။
ပါတနာများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ပါဝါဖြေရှင်းချက်ပေးခြင်း၊ ပေါင်းစပ်၊ ဘက်စုံ၊ အဆင့်ပေါင်းစုံနှင့် ဘက်စုံတန်ဖိုးထပ်ဖြည့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများအား ထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများတွင် Goldencell ၏တန်ဖိုး-ငွေတန်ဖိုးကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်စေပါသည်။ဝန်ဆောင်မှု
2008 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd. သည် သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ရောင်းချမှုနှင့် စွမ်းအင်ထုတ်ကုန်အသစ်များ၏ ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသော နည်းပညာမြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ cathode ပစ္စည်းများ၊ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများနှင့် ဘက်ထရီထုပ်များ၊ ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ၊ စူပါကာပါစီတာများ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ CSIC ၊ United States General Electric (GE) ၊ United Kingdom PK ၊ Germany BMZ နှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ အခြားသော နာမည်ကြီးလုပ်ငန်းများ။ ကုမ္ပဏီသည် Shenzhen နှင့် Shandong Goldencell Power Technology Co.,Ltd တို့တွင် ရုံးခွဲရှိသည်။
ယခင်- ရထားလမ်းစစ်ဆေးရေးစက်ရုပ်/လုပ်ငန်းသုံး ပို့ဆောင်ရေးစက်ရုပ်အတွက် နက်ရှိုင်းသောစက်ဝိုင်းလျှပ်စစ် သယ်ယူရထားလမ်းအတွက် လစ်သီယမ်ဘက်ထရီ
နောက်တစ်ခု: အရည်အသွေးမြင့် စိတ်တိုင်းကျ ကြီးမားသော ပြင်ပဘက်ထရီအိတ် အရေးပေါ်မီး Garden Light Flash Light Lithium Ion ဘက်ထရီ